APEM PAIQ sy MIARAKAP: miara-miombon’antoka ho amin’ny fampindramam-bola - ewa.mg
APEM PAIQ sy MIARAKAP: miara-miombon’antoka ho amin’ny fampindramam-bola
News - APEM PAIQ sy MIARAKAP: miara-miombon’antoka ho amin’ny fampindramam-bola
21 taona izao ny nisian’ny Apem Paiq (1), mpampindram-bola ho an’ny mpandraharaha madinika. Kendren’ny Apem manokana ny hanampy tosika ireo olona sahirana, hamolavola ny antom-pivelomany ka hifantoka amin’izany tanteraka. « Izay mahay miasa, tsy matahotra mindrana », hoy ny talen’ny Apem, Rasoanarivo Rihatiana. Tsy mitaky antoka momba ny fitaovana koa ny Apem fa fanomezan-toky iombonan’ny mpindrana amina olon-kafa.
Ampiana amin’izany ireo manana tetikasa madinika, hahazoana famatsiam-bola hatramin’ny 6 tapitrisa Ar. Miainga avy amin’izany ny ady amin’ny fahantrana. Na izany aza, vitsy ihany ny Malagasy tena mitodika any amin’ny fandraharahana. Koa teraka izao ny fiaraha-miasa eo amin’ny Apem sy ny Miarakap (2), sampana iray mpamatsy vola ny orinasa madinika sy salantsalany sy ireo izay vao manomboka miasa amin’ny safidiny. Momba ny fambolena sy ny fiompiana, ohatra, miantso ireo fikambanana na ONG, toy ny GIZ, ny Prosperer, ny Miarakap ho afaka manampy ny lafiny teknika sy manome fiofanana momba izany ho an’ny mpindrana.
Hampindram-bola olona 15 000
Tanjona amin’izao fiaraha-miasan’ny roa tonta izao ny hampindram-bola olona 15 000 hatramin’ny taona 2023. Lalana iray hialana amin’ny tsy fanaran-dalàna koa izany (informel) sy famoronana asa. Efa zatra manome tolotra sahaza ho an’ireo izay tonga ao aminy ny Apem. Ankoatra ny vola indramina, eo koa ny fampiofanana amin’izay hatao. Resy lahatra ny Miarakap ka nametraka renivola miasa ao amin’ny Apem. Hatevenina, araka izany, ny famatsiam-bola hisarihana olona maro, indrindra ny tanora, na ireo efa manana ny ataony ka mila hatsaraina sy hampitomboana.
“Mahafaly anay ny manampy ny Apem mijoro ara-dalàna sy manana fanamby hampiakatra ny harinkarena”, hoy ny mpiandraikitra ao amin’ny Miarakap, Rtoa Alia Drouin. Tanteraka izao famatsiam-bola izao noho ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny Miarakap sy ny Coopération de Monaco, namatsy vola ny fanampiana teknika talohan’ny nandraisana fanapahan-kevitra amin’izao fiarahan’ny roa tonta izao. Tsiahivina fa atao hanohana ireo fianakaviana sahirana hampitombo ny vola miditra ny Apem. Vehivavy ny 70 % ny mindram-bola ao aminy.
Apem Paiq (1): Association pour la promotion de l’entreprise-Projet d’appui pour les initiatives des quartiers (Faritra Analamanga sy Itasy)
Miarakap* : Afaka mampindram-bola 100 tapitrisa hatramin’ny 1 miliara Ar
L’article APEM PAIQ sy MIARAKAP: miara-miombon’antoka ho amin’ny fampindramam-bola a été récupéré chez Newsmada.
Nanomboka ny tapaky ny volana novambra ka hatramin’izao ny hetsika ataon’ireo « Gilets jaunes » any Frantsa. Tsy eken’ny maro anisa intsony ny fiakaran’ny vidin-tsolika. Tao anatin’ny herintaona monja : ny lasantsy niakatra 15 % ; ny gazoala nanatombo 23 %. Mirotsaka any amin’ny kitapom-bolam-panjakana avokoa ny 2/3 avy amin’ireo vidin-tsolika ireo. Nanambara ny fitondrana frantsay fa ny vidin’io akora io eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny mahatonga izany, mety mbola hitohy hatramin’ny taona 2022. Toherin’ny maro anisa izany vidin-tsolika izany, ary vao mainka mihahenjana ny hetsika, miteraka fikorontanana manerana ny tanàna maro, indrindra raha ny hita tao Paris, ny faran’ny herinandro teo. 84 % amin’ny vahoaka frantsay manamarina ny ataon’ny « Gilets jaunes », araka ny navoakan’ny gazety Le Figaro. Mampitombo ny hatezeran’ny mponina ny valintenin’ny ny filoha frantsay, Emmanuel Macron. Tsy resy lahatra tamin’ny fanazavana nomen’ny filohany ny vahoaka frantsay. Nanambara ireo mpitarika ny hetsika fa samy hafa tanteraka ny fitakian’izy ireo sy ny ataon’ireo mpanararaotra mandroba, mangalatra sy mandoro. Tranombarotra maro voaroba na tsy afa-nisokatra, fifamoivoizana tapaka. Mbola tsy voavaha izany ity olana goavana ity hatramin’izao. Firenena iray iharan’izay sondro-bidin’ny solika matetika izay i Madagasikara, nefa mbola tsy hita aloha izao ny loko manohitra izany fa ny loko manohana kandida amin’ny filoham-pirenena no betsaka. R.MathieuL’article Frantsa: manohitra tanteraka ny fiakaran’ny vidin-tsolika a été récupéré chez Newsmada.
Andavamamba :: Fiarakely nivarina tao anaty lakandrano
Nivarina tetsy amin’ny lakandranon’Andriantany, teny Andavamamba, ny fiarakely iray marika « Peugeot 206 », ny alin’ny alahady lasa teo. Naratra tamin’izany ny vehivavy iray tao anatin’ny fiara. Mbola tra-maraina tao anaty rano ity fiara niharan-doza ity. Olona telo no voalaza fa tao amin’ilay fiara. Polisy nanao fisafoana teny amin’iny faritra iny no nahatazana azy efa tao anaty rano ka nanatona nanao ny fizahana. Nambaran’ny loharanom-baovao iray avy ao amin’ny Kaomisarian’ny polisy etsy Isotry fa niala lavaka no nampivarina ny fiara tao anaty lakandrano. Tsy voatazon’ny mpamily nyfamiliana ka nidona tamin’ny hazo ny fiara, avy eo namantana tany anaty rano. Natolotra ny polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana ny fanadihadiana. L’article Andavamamba :: Fiarakely nivarina tao anaty lakandrano est apparu en premier sur AoRaha.
Anisan’ireo firenena afrikanina valo, nihaona tamin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny sinoa, i Wang Yi, ny minisitra malagasy (MAE), Andriantsitohaina Naina. Votoatin’ny fotoana tany Sina ny fivoriamben’ny mpandrindra hanatanteraka ny vokatry ny fihaonana an-tampony tany Beijing, nandritra ny « Fihaonambe mikasika ny fiaraha-miasa Sina sy i Afrika » (FCSA), atao ny 24 sy 25 jona izao.Nambaran’ny minisitra Andriantsitohaina Naina, nandritra ny fihaonany tamin’ny minisitra sinoa, fa misy ny fanantenana hampiroboroboana hampifandrindrana ny Finiavana fifamatorana sy lalana (Initiative la ceinture et la route) sy ny vokatry ny fihaonamben’i Beijing (Focac), andaniny, amin’ny paikady hampandrosoana an’i Madagasikara, ankilany. Nanamarina ny minisitra sinoa, nilazany fa vonona hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra samihafa i Sina.Notoloran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Andriantsitohaina Naina, mariboninahitra koa ny dokotera sinoa, miisa 30, ny 23 jona teo, ho fankasitrahana ny asa fitsaboana nataon’izy ireo taty Madagasikara. Nomarihiny fa anisan’ny zava-dehibe amin’ny fiaraha-miasa amin’i Sina ny fananganana fotodrafitrasa, ny fitaovana sy kojakojam-pitsaboana, ny fitetezam-paritra amin’ny fitsaboana. « Endriky ny fahatokisan’ny Malagasy ny fiaraha-miasa amin’i Sina izao hetsika izao », hoy ihany ny minisitra.Njaka A.L’article MAE: matotra ny fiaraha-miasa amin’i Sina a été récupéré chez Newsmada.
90 % ny olombelona no tsy mahafantatra akory hoe iza marina izy, inona ny tena tanjony amin’ny fiainana, raha fanadihadiana manerantany. Hany ka manaraka ny onjam-piainana fotsiny na dia tsy mitarika any amin’ny fahombiazana aza. Ao ireo manontany tena fa nahoana no tsy mahomby mihitsy amin’izay rehetra atao. Anisany ho valiana mandritra ny seminera “INVINCIBLE” ho tanterahina ny sabotsy 27 sy ny alahady 28 jolay 2019 eny amin’ny Arena Ivandry io fanontaniana io. Ho resahina ao anatin’ny roa andro ny fomba hahombiazan’ny olona iray amin’ny lafiny rehetra. Nambaran’ny mpanorina ny MasterLife, Rajaona Toky fa mifototra amin’ny fampivoarana ny maha olona no antom-pisian’ny orinasany. Hiompana amin’ny fahatokisan-tena sy filaminana anaty ny seminera andiany voalohany ity ka ho resahana amin’ny andro voalohany ny hoe: fahavalon’ny fahombiazana ny tahotra, ahoana ny hamadihana azy ho hery. Ny famohazana ny hatsarana ao anaty kosa no ho velabelarina amin’ny andro faharoa. Ankoatra izany, hampahafantarina mandritra ny seminera ny teknika hahombiazana amin’ny lafiny fandraharahana. Araka ny fanazavan’ity mpampihatra ny teknika fampivoarana ny maha olona, “Programmation Neuro-Linguistique” (PNL) ity fa misy singa maromaro mifanjohy no mandrafitra ny fahombiazana: ny vola, ny asa, ny fitiavana, ny tokantrano ary mila jerena akaiky ireo. Nohamafisiny fa 80 % miantoka ny fahombiazana ny toe-tsaina, avy amin’ny fahaiza-manao kosa ny 20 %. Mila manana vina, mijery lavitra, manana fahasahiana, manana fahatokisan-tena ihany koa raha te hahomby, hoy ny mpanorina ny orinasa mpamboly toe-tsaina te hivoatra. Nirina R. Cet article SEMINERA « INVINCIBLE »: Ny lalana hizorana any amin’ny fahombiazana est apparu en premier sur déliremadagascar.